Yasaka Shears, ဂျပန်၏အထင်ကရဘာဘာညှပ် - ဂျပန်ကတ်ကြေး
Yasaka Shears, ဂျပန်၏အထင်ကရဘာဘာညှပ်
ဂျိမ်းအဒမ်အားဖြင့်ဖြစ်သည် မတ်လ 04, 2019 ဖတ်ပြီးသားမိ 2
Yasaka Shears Japan သည်အဆင့်မြင့်ဂျပန်ရိုးရာကတ်ကြေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီအဖြစ်လူသိများသည်။ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးဂျပန်သံမဏိပြားများနှင့်ရိုးရှင်းသော ergonomic ပုံစံများကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဘာဘာဆိုင်များထက် ပို၍ ရိုးရာနည်း? ဒီတော့ Yasakaမကြာသေးမီကဂျပန်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအကောင်းဆုံးဆံစက်ကိရိယာအဖြစ်7'Inch Barber Shear ကိုနိုင်ငံတကာတွင်တွန်းအားပေးခဲ့သည်။
အကောင်းဆုံးကိုရှာဖွေပါ Yasaka သြစတြေးလျမှာဆံညှပ်။
ဆံပင်ညှပ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်ဖြတ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်မျှသာမဟုတ်ဘဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတတ်နိုင်သမျှဖောက်သည်အများအပြားကိုဖြတ်သန်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်မျှသာမဟုတ်ပါ။ ထပ်ခါတလဲလဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ ဆံပင်ပုံစံနှင့်ဆံပင်ညှပ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်သူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုဖော်ပြသည့်ဘာဘာ၏စတိုင်နှင့်အရည်အသွေးပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် ၀ ယ်သူများပြန်လာကြသည်။
ရိုးရာဆံပင်ကိုစိတ်ထဲထားပြီး Yasaka အရည်အသွေးမြင့် Japan7"ဘာဘာ Shear အားနိုင်ငံတကာဆံသွယ်စျေးကွက်သို့ ဦး တည်သွားစေနိုင်သနည်း။ ထူးခြား။ ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောဒီဇိုင်းရှိပြီးလှပသည်"YasakaKanji ရှိအမှတ်တံဆိပ်၊ ပေါ့ပါးပြီးဟန်ချက်ညီညီမှုနှင့်ဖြတ်တောက်နေစဉ်အတွင်းသင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက် offset လက်ကိုင်ဖြင့် ergonomics ဖြစ်သည်။
ဘာကြိုက်လဲ။ အကယ်စင်စစ်သင်သည်ဤအချက်မှာသင်သည်ဤအရည်အသွေးမြင့်ဂျပန်ဆံညှပ်ညှပ်နှင့်အတူသွားရန်စျေးကြီးစျေးနှုန်းမျှော်လင့်လိမ့်မယ်။ 2019 ခုနှစ်တွင်ဂျပန်ကတ်ကြေးနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်သည် Yasaka Shears Japan သည်သင့်အားအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကိုယူဆောင်လာပါကဤညှပ်မှုအတွက်ဒေါ်လာ ၇၀၀ + ပေးစရာမလိုတော့ပါ။ ၎င်းတို့ကိုမင်းထံသို့ဒေါ်လာ ၃၄၉ ဖြင့်သာအခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
"ငါကဂျပန်ကနေခုနစ်လက်မဆံပင်ညှပ်ကိုသုံးတယ်" ဟုဘာဘာကျွမ်းကျင်သူ John Munez ကရှင်းပြသည်။ "အရည်အသွေးမြင့်လာတာနဲ့အမျှကြာရှည်ခံတယ်။ ဆံပင်ညှပ်တဲ့အခါကျွန်တော့်ကိုပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိစေတယ်။ ဒါပေမဲ့မကြာသေးခင်ကလမ်းကြောင်းကလူတွေဒေါ်လာ ၃၀ ကနေကတ်ကြေးကို ၀ ယ်ပြီး ၃-၆ လတိုင်းမှာလဲလှယ်တာကိုပြတာပါ။ Yasaka ဒီဟာတွေဟာအရည်အသွေးမြင့်မားပြီးစျေးနှုန်းချိုသာတဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးဆံညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှာသာဖွစျတာ5နှစျကျြောရှိပါတယျ
Yasaka Shears Japan သည်သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်တို့တွင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဂျပန်ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်ကတ်ကြေးများကိုပို့ဆောင်ပေးသူအဖြစ်လူသိများသည်၊ ယခုသူတို့လုပ်ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်minaဘာဘာကတ်ကြေးစျေး။ သို့သော် Barber Shears တွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်းချိုသာစွာရရှိနိုင်ဆုံးသောဂျပန်ညှပ်များ၊ စတိုင်ကျသည့်ဒီဇိုင်းများ၊ ergonomics၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသောသံချေးများနှင့်သံချေးတက်သောသတ္တုများကိုကြည့်။ ကြည့်ပါ။ Yasaka ဂျပန်ညှပ်။
အဆိုပါ Yasaka7"လက်မဘာဘာညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ဆေးစက်များသည် Japan Scissors ရှိဆံများရောင်းဝယ်မှုတွင်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့သည် RSI (Repetitive Strain Injury) ကိုတားဆီးသောယေဘူယျအားဖြင့်နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုအတွက်ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရသော ergonomics များဖြင့်လာသည်။ ။
အဆိုပါ Yasaka ညှပ်အင်္ကျီများသည်ပေါ့ပါးပြီးပြီးပြည့်စုံသောဟန်ချက်ဖြင့်ရရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်၏အဆစ်များ၊ လက်ကောက်ဝတ်များနှင့်လက်များကိုကြာရှည်စွာဖြတ်တောက်နေစဉ်ချွတ်ပစ်သည်။
အဆိုပါ Yasaka ၇ လက်မ Blade သည်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုမရှိသောကြောင့်အကောင်းဆုံးသောဖြတ်တောက်မှုများကိုထပ်ခါထပ်ခါပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ဂျပန်သံမဏိများမှခံနိုင်ရည်ရှိပြီးခံနိုင်ရည်ရှိပြီး၎င်းတို့ကိုတစ်သက်တာလုံးရှင်သန်စေနိုင်မည့်မိတ်ဆွေဖြစ်စေသည်။
ထို့ကြောင့်သင်သည်တတ်နိုင်သည့်ဂျပန်ကတ်ကြေးတံဆိပ်နှင့်ပြည့်စုံသောနေ့စဉ်ညှပ်များကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါစို့ Yasaka7"လက်မဘာဘာညှပ်။ မှတဆင့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းမှာရရှိနိုင် ဂျပန်ကတ်ကြေး.
YASAKA ဘာဘာ SHEARS
ငါစကားမပြောနိုင်ဘူး Yasaka ဒါပေမယ့်ငါဆံပင်ကိုညှပ်ပေးတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့စကားပြောပြီးသူကအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းတွေနဲ့အရမ်းကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းတွေသုံးတာကြောင့်သူမကဂျပန်ကဆံပင်ညှပ်ရတယ်လို့ပြောတယ်။ ဆံပင်ညှပ်ညှပ်အပါအ ၀ င်ဓါးသွားညှပ်များပါ ၀ င်သောဓါးများပါ ၀ င်သောအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်သည်ကိုငါကြားဖူးလို့အံ့သြလို့မပြောနိုင်ပါဘူး။